HomeWararka CiyaarahaHarry Kane oo Doonaaya inuu Jabiyo Rikoorka Gooldhalinta Premier League.
Weeraryahanka Tottenham Hotspur Harry Kane ayaa doonaya inuu jabiyo rikoorka gooldhalinta Premier League ee maalintii ugu dambeysay ee Premier League marka ay Lilywhites la kulmaan Norwich City galabnimada Axada.
Kabtanka England ayaa walaac ka dhaliyay safarka uu ku tagayo Carrow Road markii uu ka baxay balan qaadyadii warbaahinta jimcihii xanuun dartiis – kii ugu dambeeyay ee safka dheer ee ciyaartoyda Spurs iyo shaqaalaha oo la kulmay cilad dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay. .
Warbixinada ayaa si degdeg ah u toogtay wax kasta oo xanta ah oo ku saabsan in sunta cuntada ka dillaacday kooxda, 16 sano ka dib dhacdadii caanka ahayd ee ‘lasagne-gate’ taasoo keentay in Spurs ay weydo afarta sare maalintii ugu dambeysay ee xilli ciyaareedkii 2005-06.
Si kastaba ha ahaatee, Antonio Conte ayaa ku adkeystay in Kane uu “hubaal” ahaan doono qayb ka mid ah group -ka maalinta Axadda, 28-sano jirkaan ayaana u maqan qayb kale oo taariikhda Premier League ah.
Kane ayaa durba shabaqa soo taabtay sideed jeer maalintii ugu danbeysay ee xilli ciyaareedka Premier League, kaliya Les Ferdinand iyo Andy Cole ayaa sidaas sameeyay dhowr jeer.
Ferdinand iyo Cole ayaa labadoodaba dhaliyay sagaal gool maalintii ugu dambeysay ee tartanka, taasoo la micno ah in Kane uu gool kaligii ku dhaliyay Carrow Road uu barbareeyo rikoorka labada ciyaaryahan.
Labo gool oo uu u dhaliyay kabtanka England ayaa ka dhigan inuu noqon doono rikoorka saxda ah ee gooldhalinta Premier League ee maalintii ugu dambeysay, iyadoo goolkiisii ​​ugu horeeyay uu 1-0 ku badiyay Everton maalintii ugu dambeysay ee xilli ciyaareedkii 2014-15.
Weeraryahanka ayaa markaas dhaliyay seddexleydiisii ​​​​7-1 ay ku xasuuqeen Hull City maalintii ugu dambeysay xilli ciyaareedkii 2016-17 ka hor inta uusan labo gool ka dhalin kulankii xiisaha lahaa ee 5-4 ay kaga badiyeen Leicester City si ay u soo gabagabeeyaan ololaha 2017-18.
Dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2019-20 ayaa la arkay Kane oo markii ugu horeysay dhaliyay gool barbardhac 1-1 ah oo ay la gashay Crystal Palace, halka uu sidoo kale shabaqa soo taabtay kulankii Europa League ee sanadkii hore oo ay 4-2 kaga badiyeen Leicester.
Cutub cusub oo ka mid ah buugaagta rikoorka Tottenham ayaa sidoo kale u jira Kane inuu qaato, isagoo sidoo kale noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyay abid ee Spurs rigoore ka dhaliya seddex kulan oo isku xigta oo Premier League ah.
Isagoo ka soo kabsaday si tartiib tartiib ah xilli ciyaareedka, Kane ayaa soo galaya bandhigga Norwich isagoo dhaliyay 16 gool islamarkaana uu dhigay sideed kale 36 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Wadarta guud ee 28 jirkaan xilli ciyaareedka 2021-22 ayaa haatan ah 26 gool iyo sagaal caawin 49 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, laakiin mustaqbalkiisa mustaqbalka fog wali ma cadda.